माधव नेपालको नाम लिदै ललितानिवास प्रकरणमा गच्छदारले बल्ल गरे यस्तो खुलासा, अब के गर्लान ओली-प्रचण्ड ? — Sanchar Kendra
१भारतीयले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोमा आ’क्रमण, ४२ गाडी तोडफोड २७ भवनमा आगजनी
२भारतीयले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोमा आ’क्रमण, ४२ गाडी तोडफोड २७ भवनमा आगजनी
३नेपालको कोरोना महामारीबारे बल्ल बोल्यो डब्लूएचओ
४चीनले लगायो यस्तो प्रतिबन्ध
५भारतमा बढिरहेको कोरोना महामारीबारे बोल्यो डब्ल्युएचओ
६कोरोना सक्रमणका कारण कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार पत्नीको निधन
७कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टसँग लड्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने ५ खानेकुरा र ६ काइदा, आजै थाहा पाउनुहोस
८फेरि गयो ६ म्याग्नीच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प, कहाँ हो केन्द्रबिन्दु ?
९कोरोना संक्रमणबाट बच्न र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन हरेक बिहान गर्नुहोस यस्ता व्यायामहरू
१०अक्सिजन सिलिण्डर लिन ओमान उड्यो नेपाल एयरलाइन्सको विमान
११अबेर राति सकिएको ओली-नेपाल वार्तामा के भयो सहमति ? भिम रावलले खोले यस्तो रहस्य
१२कस्तो रहला आज देशभरको मौसम
माधव नेपालको नाम लिदै ललितानिवास प्रकरणमा गच्छदारले बल्ल गरे यस्तो खुलासा, अब के गर्लान ओली-प्रचण्ड ?
काठमाडाैं । आफूमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गरेको छ दिनपछि सोमबार नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधले झूटा मुद्दा लगाइएको बताएका छन्।
बैठकमा एक घण्टाको समयमा पाए पनि करिब २ घण्टा बोलेका गच्छदारले मुद्दा दर्ता हुने सुइँको पाएपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग भेट गरे पनि आखिरमा मुद्दा दर्ता गरिएको गुनासो गरे।
आफूमाथि अख्तियारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर मुद्दा लगाएको र यो कांग्रेसमाथिको आक्रमण भएको पनि गच्छदारले बताएका थिए। मुद्दा दर्तापछि आफ्नो पक्षमा पार्टीले सदन अवरूद्ध र सडकमा आन्दोलन गरेकोमा धन्यवाद पनि दिए। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गर्दा सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा सारिएको प्रकरणमा दोषी रहेको भन्दै गच्छदारमाथि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठक गच्छदारकै कुरा सुनेर सकिएको थियो। गच्छदारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पटकपटक आग्रह गरेअनुसार आफूले बालुवाटार बाटो फराकिलो र व्यवस्थित गर्न प्रस्ताव लगेको केन्द्रीय समिति बैठकमा बताएका हुन्।
‘सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्न मोही खडा गर्ने, लालपूर्जासमेत बनाउन चलखेल गर्ने काम मैले गरेको होइन। ममाथि कांग्रेस भएकै आधारमा राजनीतिक प्रतिशोधले झूटा मुद्दा लगाइएको हो, मलाई फसाइएको छ, म दोषी होइन,’ गच्छदारले बैठकमा राखेका कुरा उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय समिति सदस्यले भने।
यसपछि गच्छदारले आफूमाथि मुद्दा लागेपछि उच्च राजनीतिक भेटघाट गरे पनि काम नलागेको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीजीसँग ४५ मिनेट कुराकानी गरें। उहाँले केही बोल्नुभएन मेरा कुरा सुनिरहनुभयो। पछि मुद्दा दर्ता गरेपछि लाग्यो- कतै योजनावद्ध भएर उहाँ केही नबोल्नु पो भएको हो कि,’ गच्छदारले भनेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले कुनै जवाफ नदिएपछि उनी सभापति देउवा भेट्न पुगेको बताएका थिए। ‘सभापतिजीले फोन गरे पनि प्रधानमन्त्रीले केही भन्नुभएन। राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा लगाउन पाइन्न अहिले रोक्नुस् भनेर सभापतिजीले त भन्नुभएकै हो,’ गच्छदारले केन्द्रीय समितिमा छ दिन अघिका कुरा सुनाए। गच्छदारले आफूमाथि भेदभावपूर्ण ढंगले मुद्दा लागे पनि आफ्नो राजनीति नसकिने बताएका थिए।
कांग्रेसका ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार गच्छदारले, ‘म खुमबहादुरजीजस्तो मुद्दा लागेर सिद्धिन्न’ भनेका थिए। खड्कालाई २०५९ सालमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको थियो। त्यसपछि उनी दोषी ठहर भएर जेल परे। दुई वर्षअघि उनको निधन भएको थियो। जेल बसेर निस्के पनि १३ औं महाधिवेशनमा खड्का केन्द्रीय सदस्य भएका थिए।
उनले देशमा कम्युनिष्टले कांग्रेसमाथि छानीछानी आक्रमण गरेकोले कांग्रेस एक हुनुपर्ने पनि बताएका थिए। गच्छदारले करिब दुई घण्टा बोलेपछि केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले बीचैमा प्रश्न उठाए। उनले आफ्नो क्षेत्राधिकार नै नभएको प्रस्ताव किन मन्त्रिपरिषदमा लगेको भन्ने प्रश्न गच्छदारमाथि राखे।
‘तपाईं निर्दोष हो/होइन अदालतले ठहर गर्ला,’ थापाले भनेका थिए, ‘आफ्नो मन्त्रालयबाहिरका प्रस्ताव किन कानुन मन्त्रालयको राय/सुझावविना मन्त्रिपरिषदमा लगेको हो तपाईंले नै फेस गर्नुपर्छ।’ त्यसपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गच्छदारमाथि अख्तियारले राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण तवरले मुद्दा लगाएको र कानुनी रूपमा सामना गर्ने बतायो। सरकारको प्रभाव र दबावमा गच्छदारमाथि मुद्दा लगाइएको कांग्रेसको भनाइ छ।
‘ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी विषयमा अख्तियारले प्रस्तुत गरेको अभियोग पत्र आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण एवं दोहोरो मापदण्डयुक्त छ। यसले के प्रष्ट गर्दछ भने आयोगले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारमाथि नेपाल सरकारको प्रभाव र दबावमा मुद्दा दायर गरेको छ,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यो कार्य राजनीतिक पूर्वाग्रह र बदनियतले प्रेरित रहेको ठहर गर्दै बैठक घोर भत्र्सना र खेद व्यक्त गर्दछ। यस्तो प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको राजनीतिक रूपले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्दछ। नेता विजयकुमार गच्छदार कानुनी रूपमा सामना गर्दै निर्दोष सावित हुनुहुनेछ भन्ने नेपाली कांग्रेसको विश्वास छ।’